Ntughari ohuru nke Recalbox 18.06.27 dị ugbu a | Site na Linux
Naanị ihe karịrị otu izu gara aga emeputara ohuru nke Recalbox 18.06.27 nke site a na nkwupụta na gị ukara oru ngo blog Ndị mmepe Recalbox kwupụtara ọkwa nke ụdị ọhụrụ a.
E kwuola banyere Recalbox ebe a na blọọgụ na ihe karịrị otu oge, mana maka ndị na-amaghị nkesa Linux a mana lỌ bụ na m nwere ike ikwu na ọ bụ a free na-emeghe isi GNU / Linux usoro kere site Recalbox oru ngo nke a awade a dum nhọrọ nke egwuregwu consoles na usoro.
Site na sistemụ arcade nke izizi gaa NES, MEGADRIVE / GENESIS na 32-bit nyiwe, dịka PlayStation, o nwekwara Kodi, yabụ ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ọdịnaya multimedia na nkesa a.
N'adịghị ka nkesa Linux anyị na-ejikarị, Recalbox gbadoro ukwu na ntaneti na otutu iji mee ka komputa gi buru ebe obibi.
Ihe oru Recalbox bu ihe mbu ma tinye ya aka na ngwa Raspberry Pi o nwekwara ụdị PC.
n'etiti isi emulators na anyị nwere ike ịhụ na a na-ekesa na-: Atari 2600, Atari 7800, NES, Game Boy, Egwuregwu Nwa nwoke agba, Game Boy Advance, Super Nintendo, Famicom Disk System, Master System, Megadrive (Genesis), Gamegear, Game na Watch, Lynx, NeoGeo, NeoGeo Pocket, FBA ( ụfọdụ ROM), iMame4all (ụfọdụ ROM), PCEngine, Supergrafx, Amstrad CPC, MSX1 / 2, ZX ụdịdị dị iche iche, PSX, Sega Cd, Sega 32X, Sega SG1000, PlayStation, ScummVM, Vectrex, VirtualBoy na Wonderswan.
1 Banyere ụdị ọhụrụ nke Recalbox
2 New online egwuregwu atụmatụ
3 Mgbanwe na Recalbox
4 Budata Recalbox 18.06.27
Banyere ụdị ọhụrụ nke Recalbox
N'ime mbipụta ọhụrụ a nke Recalbox 18.06.27, EASports intro agbakwunyela na sistemụ ahụ n'oge Soccer World Cup na Russia.
Anyị nwekwara ike igosipụta na ndị mmepe Recalbox gbara ezigbo mbọ na mmepe nke ụdị ọhụụ a maka na ha etinyela atụmatụ ọhụrụ nke ihe karịrị otu onye ọrụ nke nkesa ga-amasị.
New online egwuregwu atụmatụ
Ihe ohuru bu Netplay nke jikọtara Retroarch na sistemụ na njirimara a ị nwere ike igwu gị ochie egwuregwu online na unlock kpọghee ekwt rụzuru dị ka consoles egwuregwu vidiyo dị ugbu a.
Ihe ọhụrụ a ị nwere ike ịme ya "NchNhr> Ntọala egwuregwu> Ntọala Netplay" Site na ebe a, ị nwere ike ịkwalite ma gbanyụọ Netplay, hazie aha njirimara Netplay gị, họrọ ọdụ ụgbọ mmiri.
I nwekwara ike ịgbakwunye CRC32 hash na egwuregwu gị ndepụta iji nweta egwuregwu ka mma na oghere Netplay.
Egwuregwu ịntanetị nwere GUI maka ahia ahịa na otu nhọrọ buut ka nnabataSite na nke a ị nwere ike iwepụta ndepụta nke aha dịnụ yana nkwado iji rụọ ọrụ a.
Mgbe ị na-eme GUI a, ọ ga-egosi anyị data dị iche iche nke anyi chotara:
Aha ojii (jiri obere akara ngosi ma ọ bụrụ na ọ bụ egwuregwu malitere na Recalbox)
Hash match (ọ bụrụ na ịnwe otu ROM ahụ na otu hash na egwuregwu gị)
Njikọ njikọ na ozi ndị ọzọ
Mgbanwe na Recalbox
Dentro nke mgbanwe ndi ozo anyi nwere ike ichota na ụdị ọhụrụ a anyị nwere ike igosipụta, lmgbanwe nke elekere, ugbu a, ọ bụghị nanị na mpaghara oge ma na-ahazi ya na oge GTM.
Ọzọkwa Amaara m nke ọma na usoro nke na-emelite na-ahọpụta emulators n'ime usoro a na-egbochi ịmalite njirimara ọrụ njirimara na igosipụta ụkpụrụ ndabara.
N'ikpeazụ, ọ pụkwara iburu n'uche na ebe ọ bụ na ụdị ọhụrụ a Recalbox ga - egosiputa egwuregwu dị n'ime folda dịka otu aha karịa ọ bụghị dịka folda, na nke a, igodo dị n'etiti ha na-edozi ma zere ịbanye n'etiti nchekwa iji gbaa egwuregwu ahụ.
Ọzọkwa gbakwunye ọrụ "Ume ndepụta egwuregwu" nke ị nwere ike iji ozugbo site na sistemụ sistemụ.
Budata Recalbox 18.06.27
Si ị chọrọ ibudata a ọhụrụ version of Recalbox Ga-aga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ya na ngalaba nbudata ya ị nwere ike ibudata ihe oyiyi nke sistemụ dakọtara maka kọmputa gị ma ọ bụ Raspberry Pi. Njikọ bụ nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ihe ohuru nke Recalbox 18.06.27 dị ugbu a
Echere m na blọọgụ adịla arụ ọrụ nke ndị ọrụ.
Daalụ maka ozi ahụ, ị ​​maara ma ọ bụrụ na enwere ike imelite ya ozugbo na enweghị ntinye ọzọ? Enwere m ụdị akwụkwọ ncheta gara aga, ozugbo emelitere mana anaghị m aghọta etu esi ejikwa mmelite na sistemụ ahụ.
Ndewo, na mbipute ọhụrụ enweghị m ike ekenye onye ọ bụla emulator egwu dị ka ọ dị na nsụgharị ndị gara aga w .wow shit uld. (Abụ ọ bụla na emulator kwekọrọ na ya dị mma)
Zaghachi Javier Rosales Cabrera
Na-etinye ha na usoro ogg na ezigbo bitrate?
Jikọọ na LibreOffice 6.1 ahụhụ kachasị njọ tupu ịtọhapụ ya